Kabary am-pandevenana - Instant Malagasy
Tonga teny, tonga Aina Connexion
Rafitry ny kabarykabary am-panambadianaKabary am-pandevenanaKabary am-bohitraFanaladianaRanjan-kabary samihafaNy mpikabaryrindran-teny an-kabary
TontolokoTontolonao mpanoratraFantaro ireo mpanoratra
Momba ny olonaMomba ny zava-manirySamihafa
SaryFomba fanaohoronantsary / sary kanto
Taovolony orany lambafirarian-tsoaNy isa sy ny fanisana
HO NENIKORESYNY TOKYHo anao malaheloZANDRYLASA AHOMi-A.VNOANA !TOVOVAVY TSARA FA....HO INONA
Ny kabary am-pandevenana
Voalaza mandrakariva mandritra ny fotoam-pandevenana ny hoe: "voninahitry ny maty ny maro mpandevina, ary voninahitry ny velona ny maro mpanotrona". Tsy neken'ny sain'ny Malagasy velively izany hoe: "tsy mifandevo-maty" satria, hono, ny Gasy tsy miady amam-paty. Hita taratra mandrakariva io fanehoam-pitiavana (fiaraha-miory, fifanampiana, fifankaherezana) mandritra ny fotoana rehetra maha eny am-bohitra ny razana. Manoloana ny fahoriana no anehoana indrindra ny maha-Malagasy, maha-mpandala ny fihavanana ka tsy intsony ny hoe: iry havan-dranona na irony longon-dranona fa dia samy mirakaraka eny fa tra-pahoriana. Ny havana tokoa no toy ny : voahangy soa mitohy am-bozaka: haingo raha vory vahoaka, fihambo raha sendra ny tsontsa, mampitraka raha tra-pahoriana.
Izany rehetra izany sy izay rehetra endrika entina anehoana ny firaisan-kina amin'ny andro manjombona no ilana ny fahaiza-misitraka. Eto no mandray adidy ny mpikabary.
Zanak'omby mandia hosy aho ka ny nizoran'ny teo aloha ihany no mba izorako avy aty afara. Tsy inona akory no tiako ambara fa ny fombafomba sy ny fantatra momba ity kabary am-pandevenana ity.
Toy izao ny fombafomba àry amin'ny kabary am-pandevenana
- Rehefa voasitrika ny razana dia miakatra eny ambony fasana ny mpikabary, marihina fa mbola tsy nototofana ny fasana mandritra io fotoana hikabariana io.
Ny votoatiny eny amin'ny fasana no fanatanterahana ny kabary. Zokiolona no mikabary (tsy mahazo mikabary ny vehivavy satria ny fasana fonenan'ny maty ary ny vehivavy fonenan'ny velona). Fahiny dia mizara telo ny mpikabary teny ambony fasana:
Mpikabary kingalahy, filo sy maranitra amin'ny fandaharana ohabolana sy oha-pitenenana. Fitanisana ny fiainan'ilay maty fahavelona no ranjan-kabarin'io mpikabary voalohany io.
Ny zaza mpandimby indray kosa no miteny. Manome toky izy fa tsy ho faty ny anaran-dray arka ny hoe: fandrotrarana an-tanàna haolo ka mandimby ny anaran-dray tsy satry.
Ny mpikabary manatanteraka ny fisaorana ny fokonolona tonga nandevina.
Miova Andriana moa, miova sata. Ankehitriny dia efa mpikabary iray ihany no manao tahaka ny masoandro ka toka-mahenika ireo rehetra ireo.
Izay no lava e, izay no fohy fa hiditra amin'ny ohatra kabary am-pandevenana isika.
Raha midona ny oran'Ankaratra, ny mana-katsaka aloha dia mamboly fa ny nilaoza-malala kosa misento. Mitsangana eto ny tenako, mitsangan-tsy zota fa noho ny teny tsy misy ifantenana. Tsy hafaliana tokoa mantsy no eto fa ranomaso, tsy sahoby fa fahoriana. Vahotra tokoa ny vava, mifandipatra ny lela, mivarahontsana ny lohalika kanefa manana adidy ratsy ka mandahatra tsy fidiny.
Instant Malagasy -
créer son blog - CGU